पृथ्वीनारायण शाहको शालिक ढाल्नेहरु १२ वर्षपछि माल्याणपण गर्न लामबद्ध - Aajavoli
Lok Awasthi २७ पुष २०७४, बिहीबार January 17, 2018
काठमाडौं । भनिन्छ, १२ वर्षमा बग्ने नदीले पनि बाटो परिवर्तन गर्दछ । पृथ्वी जयन्तीको सन्दर्भमा पनि यस्तै संयोग मिल्यो । २०६२/६३ को जनआन्दोलन पछि पृथ्वी जयन्ती अर्थात् राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस मनाउन छोडिएको थियो । ठीक १२ वर्षपछि यो वर्ष सरकारी तवरबाट यो दिवस मनाइएको छ । र, सरकारले राष्ट्रिय विदा दिएको छ ।
गजबको संयोग त के छ भने, १२ वर्ष अघि जसले पृथ्वी नारायण शाहको शालिक ढालेका थिए, तिनै शालिकमा माल्याणपण गर्न लामबद्ध देखिन्थे । हिजो सामन्ती शासक भने सत्तोसराप्नेहरु अहिले राष्ट्र नायकको संज्ञा दिन थालेका छन् । पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा डा. बाबुराम भट्टराईले ट्वीटर मार्फत शुभकामना दिएका छन् । अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले काठमाडौंको एक कार्यक्रममा पृथ्वी नारायण शाहको प्रशंशा गरे । यसरी शालिक ढाल्नेहरु शालिक निर्माणमा लागिरहेका छन् ।
समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उपप्रधानमन्त्री कमल थापा, प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीलगायत विभिन्न क्षेत्रका उच्च पदस्थ व्यक्ति सहभागी थिए । प्रधानमन्त्र शेर बहादुर देउवा पृथ्वी जयन्तीमा शुभकामना सन्देश दिएका छन् । राष्ट्रिय विदा समेत दिएका छन् ।
नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति प्रा. गंगाप्रसाद उप्रेती पृथ्वीनारायण शाहका राष्ट्रिय एकतासम्बन्धी दिव्योपदेशलाई कार्यान्वयनमा ल्याएमात्र उहाँप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जलि हुने बताए । पण्डित विश्वप्रेम भट्टराई सरकारले ढिलै भए पनि पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्मान गरेर राम्रो कामको थालनी गरेको बताए । सरकारले पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई ढिलै भए पनि सम्झेको छ, अब मुलुक सशक्त भएर अगाडि बढ्नेछ, उहाँले भने ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जितेन्द्रनारायण देव पृथ्वीनारायण शाहका दिव्योपदेश नयाँ ढंगबाट अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । पृथ्वीनारायण शाहले लामो समयको नेपाललाई कल्पना गरेर दिव्योपदेश दिनुभएको हो, यो अहिलेको समयमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको बताए ।
#पृथ्वी जयन्ती#पृथ्वी नारायण शाह